Xog: Xaalad Adag Oo Soo Wajahday Dhaawacyadii Qatar U Qaaday Suudaan – Hornafrik Media Network
Dowladda Qatar ayaa ka mid ah dowladaha u soo gurmaday dadka Soomaaliyeed kadib qaraxii ka dhacay Zoobe,iyada oo dhaawacyo u qaaday dalka Suudan.
Isbitaalka la geeyay Dhaawacyadda oo lagu magacaabo Mutamayiz Hospital oo badanaa ay ku tababartaan dhalinyarada caafimaadka barata ee Suudaan iyo kuwa ajaanibta ee Jaamacadaha dalkaas dhigta ayaa waxaa iska leh Wasiirka Caafimaadka Sudan oo loo xilsaaray daryeelka Dhaawacyadaasi. Waxaana Wasiirka lagu dhaliilayaa inuu fiirsanaya oo kaliya Dhaqaale, balse uusan xil iska saarin Dhaawacyadda Dalkiisa la geeyay inay helaan Adeegyo Caafimaad.
Hal Qol oo ku dhex yaala Qayb Isbitaal ka mida oo hadda Dhisme ka socdo ayaa la isugu geeyay Dhaawacyadda, iyadoo aysan Qololku lahayn Qaboojiyayaal, Waxaana ka jira haatan dalkaasi Kulayl daran.
Mid ka mida Ardayda wax ka barata Sudan oo la soo xiriiray HornAfrik waxa uu sheegay inaan xittaa Dhaawacyadda laga badalin Faashadihii looga soo xiray Xamar.
2 ka mida Dhaawacyadda la geeyay Isbitaalka Xaaladoodu way daran tahay, Waxaana is xilqaamay oo Isbitaalkii ay ku jireen ka bixisay Safaaradda Somalia ee Sudan oo si iskeed ah u gaysay Isbitaal ka adeeg fiican midka ay ku jireen.
Sidoo kale ehelada la socda dhaawacyada ayaa meel cidlo ah jiifa, Waxaana ay u cuntami la’a Xaaladda ay kala kulmeen Sudan.
Safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan ayaa la sheegay inay xiriir la sameysay Xukuumadda Soomaaliya, kana dalbatay in la hakiyo dhaawacyada laga soo qaadayo Muqdisho, maadaama kuwii shalay la keenay aanay helin wax daryeel ah.
Sidoo kale Safaaradda waxay la xiriirtay Safaaradda Qadar oo Dalkeedu Dhaawacyadda keenay Khartoum ballanqaadeena inay bixinayaan Dhaqaalaha ku baxaya, Waxayna Labada Safaaradood hadda culays ku saarayaan Wasiirka Caafimaadka Sudan inuu Dhaawacyadda geeyo Isbitaal leh Adeegyo Caafimaad.
Dowladda Qatar ayaa sheegtay inay bixineyso lacagaha lagu daweynayo dhaawacyada, iyadoo ka cudur daaratay in dalkeeda aanu la tacaalin karin dhaawacyadaas.
Al-Shabaab oo sheegatay dilkii Xildhibaan ka tirsanaa Jubbaland